★မြန်မာ့အလင်း★: ကွဲစရာအရှက်၊ ကျစရာသိက္ခာမရှိတဲ့ ကျွန်ကုလား (၂)
ကျွန်ကုလားတွေမှာ တကယ်ကို အရှက်မရှိပါဘူး။ ကွဲစရာအရှက်၊ ကျစရာသိက္ခာမရှိတဲ့ ကျွန်ကုလား (၁) ဆောင်းပါးရေးတင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ အဲဒါသူမဟုတ်ပဲ ကျနော် (ဇော်မျိုး)က လုပ်ကြံဆွေးနွေးထားတယ်ဆိုပြီး ငြင်းခဲ့ပါသေးတယ်။ ချောင်ပိတ်ပြီး ပြောတော့မှ ကုလားမက (ကျွန်မြတ်သူ) သူအစစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ၀န်ခံတော့တယ်။ ပထမရက်မှာ ဘလော့လိပ်စာတောင် မပေးရဲပဲ ရူးကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားတဲ့ အဖြစ်ကို ပျောင်နောက်တာ မခံနိုင်လို့ နောက်ရက်မှာ အခုလိုစကားတွေ ထပ်ပြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဘလော့အစစ်ကို တည်ထောင်ထားသူဖြစ်တယ်။ ကြိုက်သလို စမ်းစစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးလည်း စိန်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ တကယ်လဲစမ်းစစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ ကျွန်ကုလားမကြီးမြတ်သူ ချက်ချင်းဆိုသလို ရူးကြောင်ကြောင် ဖြစ်သွားတာကို မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ အောက်ကနေ စပြီးဖတ်ပါခင်ဗျာ။ ကျနော်ရေးတဲ့စာတွေကို အပြာရောင်နဲ့ခြယ်ထားပါတယ်။
18 Sep 09, 04:03
ဇော်မျိုး>ကျွန်မြတ်သူ: ကျွန်ကုလား.. သနားတယ်ကွာ :D အားလုံးသိမ်းထားပြီးပြီ
မြတ်သူ: ယခုရောက်လာ တို့သူငှာ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ။
မြတ်သူ: ယခုရောက်လာ တို့သူငှာ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ။ယခုရောက်လာ တို့သူငှာ
18 Sep 09, 04:02
18 Sep 09, 04:01
18 Sep 09, 04:00
မြတ်သူ: ငါလည်းမနက်အလုပ်ရှိတယ်။ မင်းဒိုးတော့။ စုတောင်းစား။
18 Sep 09, 03:59
မြတ်သူ: မင်းသွားသင့်ပြီ။ ငါလည်းမင်းနဲ့ချက်ရတာအကုသိုလ်များတယ်။
မြတ်သူ: သိပ်ရှည်ရှည်ဝေးဝေးမပြောဘူး မင်းလားကွသခင်မျိုးဟေ့ဒို့ဇော်မျိုး။
(သာမန်လူရှက်ရမယ့်အချိန်မှာ ကျွန်ကုလားတွေက အရှက်ဆိုတာမရှိတော့ ရူးကြောင်ကြောင်ပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ အခုကစပြီး ရူးကြောင်ကြောင်ဖြစ်တာကို မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒန်..ဒန်..ဒန်)
18 Sep 09, 03:58
ဇော်မျိုး>ကျွန်မြတ်သူ: အခုလောက်ဆိုရင် ငါ့ဆောင်းပါးအတွက်လုံလောက်ပြီ ။ မင်းတို့လိုကောင်တွေ ချေးစားတဲ့ခွေးလောက်မှ အဆင့်မရှိတဲ့ မိုဟာမက်နဲ့ပဲထိုက်တန်တယ်ဆိုတာ လူတွေကို တင်ပြဖို့အထောက်အထားရပြီ။ ဘိုင်ဘိုင် :D ကျွန်ကုလား
(အဲလိုနစ်နစ်နာနာပြောလို့ ကျွန်ကုလားရှက် မယ်မထင်နဲ့)
မြတ်သူ: ငါက ဗုဒ္ဓဘာသာ၊မြန်မာလူမျိုး၊မေမြို့မှာမွေးတယ်ရှမ်းစပ်သည်။ တစ်မှုးရလို့တစ်ပဲလှု တို့ရှမ်းတောင်သူတူနိုင်ရိုးလား။
18 Sep 09, 03:57
မြတ်သူ: မင်းအက်စစ်တော့ကြောက်တယ်မှတ်လား။ ငါ့မှာလည်းဂဲတစ်လုံး။မင်းမှာလည်းဂဲတစ်လုံး။ သတ္တရှိရင်ဗလီဂဲနဲ့သွားပေါက်ပါလားကွ။
(ကျွန်ကုလား ဒီမှာပဲ ၀ဲလည်နေတယ်။ ဘာမှမဖြေရဲတော့ဘူး)
ဇော်မျိုး>ကျွန်မြတ်သူ: မင်းကတိပေးထားတဲ့အတိုင်းဖြေမလား မဖြေဘူးလား? ချေးစားတဲ့ခွေးလောက်မှ အဆင့်မရှိတဲ့ မိုဟာမက်ကိုးကွယ်တဲ့ ကျွန်ကုလား? :D
18 Sep 09, 03:56
(အဲလိုပြောနစ်နစ်နာနာ ပြောလို့ ကျွန်ကုလားတွေ ရှက်မယ် မထင်နဲ့နော်။ ကျွန်ကုလားမှာ ကွဲစရာအရှက်မရှိဘူးလေဗျာ)
မြတ်သူ: မင်းဖြေခိုင်းတိုင်းငါကဖြေရအောင်မင်းကဘာကောင်လဲ။ အလကားကြောက်ချေးပမ်း။ သတ္တိကြောင် အဝေးကလေသေနတ်ပစ်။
18 Sep 09, 03:55
ဇော်မျိုး>ကျွန်မြတ်သူ: မင်းကတိပေးထားတဲ့အတိုင်းဖြေဖို့က မင်းတာဝန်။ ကျွန်ကုလား ဖြေစမ်း
(မိတ်ဆွှေဘလော့ရှိလားဆိုတဲ့ လွယ်ကူတဲ့ မေးခွန်းတောင် မဖြေရဲတဲ့အဖြစ်ပါ။)
18 Sep 09, 03:54
မြတ်သူ: မင်းမှာလည်းဗုဒ္ဓဘာသာအချင်းချင်း ပရိယတ်၊ပဋိပတ် ဆွေးနွေးရမယ့်အစား။ တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေကုန်ပါပြီကွာ။
18 Sep 09, 03:53
ဇော်မျိုး>ကျွန်မြတ်သူ: ငါအားတာမအားတာ မင်းကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ မင်းကတိပေးထားတဲ့အတိုင်းဖြေဖို့က မင်းတာဝန်။ ကျွန်ကုလား ဖြေစမ်း
မြတ်သူ: ဟေ့ကောင်အားနေလား မင်းအားလို့ ကုလားကအက်စစ်နဲ့ပက်တာမကြောက်ရင် ငါ့လိုဗလီကိုဂဲနဲ့သွားထုကွာ။
18 Sep 09, 03:52
ဇော်မျိုး>ကျွန်မြတ်သူ: ၂ နှစ် ပြည့်တော့မယ်ဆိုတော့တော်တော်ကြာပြီပဲ။ မင်းဘလော့အသိမိတ်ဆွေတွေလဲရမှာပေါ့နော်
မြတ်သူ: ဟေ့ကောင်အားနေလား မင်းအားလို ကုလားကအက်စစ်နဲ့ပက်တာမကြောင်ရင် ငါ့လိုဗလီကိုဂဲနဲ့သွားထုကွာ။ဲ
(ကုလားတွေဟာ အက်ဆစ်နဲပက်တတ်တဲ့ ထုံးဆန်ရှိတာ သူကိုယ်တိုင် ၀န်ခံထားပါတယ်။ နောင်မှ သတိပြုကြပါ)
18 Sep 09, 03:51
ဇော်မျိုး>ကျွန်မြတ်သူ: ကျွန်ကုလား။ မေးတာဖြေပါကွာ။ အဖြေတစ်ခုကို အကြာကြီးစဉ်းစားနေတာ မင်းတို့ကျွန်တွေမှာ အကန့်ပျက်နေလို့လား?
18 Sep 09, 03:49
မြတ်သူ: မင်းငါ့ကိုပြောနေတာလား ကိုမေတ္တာကိုပြောနေတာလား။ ငါ့နာမည်မြတ်သူ အိုင်ဒီတစ်ခုတည်းရှိတယ်။ မင်းလိုဥာဏ်မများဘူး။
(စာတွေထပ်ခါတလဲ ရိုက်နေတာ တမျိုးမထင်နဲ့။ ကုလားမက မေးခွန်းတစ်ခုဖြေဖို့ အရမ်းကိုကြာတယ်။ လိမ်နေတာဆိုတော့ တော်တော်ကို စဉ်းစားပြီးမှဖြေပုံပေါ်တယ်။ အရမ်းလွယ်တဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုကို ၃ မိနစ်တောင် စဉ်းစားရရှာတယ်။ ကျနော် ဘာဖြစ်လို့ မိတ်ဆွှေရှိလား မေးလဲဆိုတာ ရှင်းချင်ပါတယ်။ ၂ နှစ်ပြည့်တဲ့ဘလော့ဆိုရင် ဖတ်နေကြ ဘလော့တွေရဲ့ Linkတွေထည့် တတ်ပါတယ်။ သူ့ဘလော့မှာ Link တစ်ခုမှ လုပ်မထားဘူး။ အဲဒါဟာ သာမန် ဘလော့ တစ်ခုနဲ့ မတူညီတဲ့ အချက် တစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့အချက်တွေများကြီးလည်း ရှိပါသေးတယ်)
ဇော်မျိုး>ကျွန်မေတ္တာ: ၂ နှစ် ပြည့်တော့မယ်ဆိုတော့တော်တော်ကြာပြီပဲ။ မင်းဘလော့အသိမိတ်ဆွေတွေလဲရမှာပေါ့နော်
18 Sep 09, 03:48
မြတ်သူ: စပ်စပ်စုစု လျှာကလည်းအတော်ရှည်။ မိန်းမကြံမိန်းမကျင့်နဲ့ဇော်မျိုးတော့ လူမုန်းများပါဘိ။
18 Sep 09, 03:47
ဇော်မျိုး>ကျွန်မေတ္တာ: ငါမေးတဲ့မေးခွန်းက မင်းအတွက် ဖြေဖို့အတော်ကို ခက်နေလား? :D ကျွန်ကုလားပြောစမ်း
18 Sep 09, 03:46
မြတ်သူ: သခင်ဇော်မျိုးကြီးရယ် မင်းမှာလည်းဒီဒုက္ခကမသေးပါလား။ မင်းအကုသိုလ်ကလည်း မင်းနောက်ထပ်ကြပ်မကွာပါလား။ cherrymyodaw-dhamma.blogspot.com ဟာဘာဘလော့လဲ လူတိုင်းမေး မင်းလိုမညံ့ဘူး။
18 Sep 09, 03:45
ဇော်မျိုး>ကျွန်မေတ္တာ: တစ်လကြာပြီ။ တစ်နှစ်ကြာပြီ။ စသဖြင့် ခန့်မှန်းပြောပါကွာ :D
18 Sep 09, 03:44
ဇော်မျိုး>ကျွန်မေတ္တာ: မမှန်းတတ်ဘူး? ငါပြောတာ ဘယ်နှစ်လက လုပ်ထားတယ်ဆိုတာမျိုးပါ။ ခန့်မှန်းခြေလေးပါကွာ။
မြတ်သူ: မင်းနဲ့ချက်ရတာ မင်းကလိန်ကျစ်ငြမ်းစင်တာကလွဲရင် အပျင်းတော့ပြေသားကွ။
18 Sep 09, 03:43
မြတ်သူ: မင်းကလူတွေကိုကျ ကျွန်ကုလားဆိုပြီး စွပ်စွပ်စွဲစွဲအကဲခတ်မြန်တယ်။ ဘလော့ဘယ်လောက်ကြာပြီ မကြာသေးဘူးဆိုတာတော့ မမှန်းတတ်ဘူးထင်ပါ့။
18 Sep 09, 03:42
ဇော်မျိုး>ကျွန်မေတ္တာ: ကဲပါ။ ကျွန်ကုလား . . . မင်းဘလော့ ဘယ်တုံးက စထောင်လဲဆိုတာ တစ်ချက်လောက်ပြောစမ်းပါ
18 Sep 09, 03:41
မြတ်သူ: ကဲလုပ်ပါဦး သခင်ဇော်မျိုးကြီးရယ် ဘယ်လိုများမိန်းမကြံမိန်းမကျင့်နဲ့ ကလိန်ကကခြင်သေးလဲ။
ဇော်မျိုး>ကျွန်မေတ္တာ: ကဲပါ။ ကျွန်ကုလား မင်းဘလော့ ဘယ်တုံးက စထောင်လဲဆိုတာ တစ်ချက်လောက်ပြောစမ်းပါ
18 Sep 09, 03:40
ဇော်မျိုး>ကျွန်မေတ္တာ: ကဲကဲ.. ကျွန်မြတ်သူ.. ငါမေးမယ်
မြတ်သူ: မင်းအဖေစိတ်ဆရာဝန်ကြီးက မင်းကိုဆေးပုံမှန်တိုက်ရဲ့လား။ မင်းခုဆေးသောက်ပြီးမှ ချက်နော်။
18 Sep 09, 03:39
ဇော်မျိုး>ကျွန်မေတ္တာ: ဟေ့ကောင်ကျွန်မြတ်သူ။ မင်းက မနက်တုံးက ငါ့ကိုမင်းဘလော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွင့်ပေးတယ်နော်။ ဟဲဟဲ။ မင်းကတိအတိုင်းငါမေးမယ် ;)
မြတ်သူ: http://cherrymyodaw-dhamma.blogspot.com/ ဒီဘလော့က ဟန်ဆောင်ဘလော့တဲ့ခင်ဗျား ဝေဖန်ပေးကြပါဦး စာဖတ်သူတို့။
18 Sep 09, 03:38
18 Sep 09, 03:37
မြတ်သူ: သရဏဂုံဆောက်တည်ပြီးသား ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦးက ဗုဒ္ဓဘာသာထဲပြန်ဝင်ရဦးမတဲ့လားဇော်မျိုး။ မင်းကိုမင်းလည်းသိပ်အထင်ကြီးသကိုး ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လူကဲခတ်တော်သယောင်ဟန်ဆောင်ကောင်းပါဘိဇော်မျိုး။
မြတ်သူ: ဟုတ်ပါပြီ သခင်ဇော်မျိုးကြီးရယ် ဘယ်လိုများသာသနာကို နေလိုလလိုထွန်းပအောင်ဆောင်ရွက်နေပါသလဲ။ သူများဆောင်းပါးတွေကူးယူပြီးဘလော့တင်ရတာ အားမှရရဲ့လား။
18 Sep 09, 03:36
မေတ္တာ: ပညာမဲ့သူ၏ ချစ်ခြင်းမှ ကင်းဝေးကြပါစေ
18 Sep 09, 03:35
18 Sep 09, 03:28
ဇော်မျိုး>ကျွန်burman: ကျွန်ကုလားတွေကို အနိုင်ကျင့်ဖို့စောင့်ရတာ အချိန်သာကုန်တယ်။ ဘယ်သူမှလဲမရှိဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာဟန်ဆောင်ထားတဲ့ ကျွန်မေတ္တာလဲ ငါရှိရင်အမြဲပျောက်တယ်။ ကျွန်ကို အနိုင်ကျင့်ချင်တယ်ကွာ :(
18 Sep 09, 03:25
ဇော်မျိုး>ကျွန်burman: မျိုးကန်းကုလားတွေကို လုံးဝလူရာမသွင်းပါ.. :D မင်းတို့ကို မုဒိမ်းကျင့်တဲ့ အာရပ်တွေကို သခင်လိုသဘောမထားပဲ ပါးရိုက်ရဲတဲ့ တနေ့ လူရာသွင်းမည် :D မျိုးကန်းကုလားကနေ ပုံမှန်ကုလားဖြစ်ဖို့ အရင်ကြိုးစားပါ ;) :) :P
ဇော်မျိုး>ကျွန်burman: မွတ်ဆလင်ကို မာဖီးယားတွေလို့ပြောတာ မကျေနပ်လို့ သတ်ဖြတ်ဖို့ခြိမ်းခြောက်တယ်ဆိုပဲ။ အကြမ်းဖက်ဝါဒလို့ပြောတာ မကျေနပ်လို့ အကြမ်းဖက်တုံ့ပြန်လိုတဲ့ မျိုးကန်းကုလားတွေစိတ်ထားကို အရမ်းရယ်ချင်တယ်။ ဟားဟား :D
18 Sep 09, 03:24
ဇော်မျိုး>ကျွန်burman: ကုလားမတွေရဲ့ဖင်ကို အာရပ်တွေဝိုင်းချတဲ့ သမိုင်းအမှန်ကိုပြောခံရရင် ရှက်ရမှာပါ။ ကုလားမှာအရှက်နဲ့သိက္ခာလုံးဝမရှိပါ။ ဒါ့ကြောင့်ရှက်ရမယ့်အစား ကုလားတွေ ရူးကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားတာ။ ခွိခွိ :glad: :glad:
18 Sep 09, 03:23
ဇော်မျိုး>ကျွန်burman: ကျွန်ကုလားတွေကို ကျွန်လို့ခေါ်ရင် ရှက်ဟန်ဆောင်ပြီး ဒေါသထွက်နေတာပါ။ Abdul Ali, Abdullah , Abdus Shafi , Abdul Azeez စတဲ့ “ကျွန်” လို့ အဓိပါယ်ရှိတဲ့နာမည်တွေ သုံးနေတာပဲကြည့်တော့ :D
18 Sep 09, 03:22
ဇော်မျိုး>ကျွန်burman: ဇော်မျိုးဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုကြည့်စမ်းပါ။ ဘယ်လောက်လှပလဲ? မင်းတို့မွတ်ဆလင်က ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ နာမည်မှာ “ကျွန် Abdul” ဆိုတဲ့စကားလုံးကို သုံးထားတယ်။ သိပ်ပြီးကျွန်ဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့? စောက်ရှက်လည်းမရှိ :P
ဇော်မျိုး>ကျွန်burman: ကျွန်ကုလားလဲမြန်မာတွေကို ရန်တိုက်ပေးရတာ အရင်တုံးကလို အားသိပ်မရှိတော့ဘူး။ ဟားဟား
ဒီကနေ စပြီး အထက်ကို ဖတ်သွားမယ်နော်
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 10:32 AM
ကဲဇော်မျိုးရေ မင်းဆောင်းပါးကိုဘယ်သူမှလာမဖတ် ဘယ်သူမှကွန့်မန့်မရေးသွားလဲ ငါကိုယ်တိုင်လာဖတ်ပြီးရေးသွားပြီနော်။
ငါပြောချင်တာက ငါသည်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက် ဗုဒ္ဓဘဂ၀ါကို ယုတ်ရင်းကြမ်းတမ်းစွာဆဲမှာမဟုတ်ဘူး။
ပိတောက်မြေစီဘောက်နဲ့ မင်းစီဘောက်မှာ တစ်ခါတစ်လေငါ့နမည်သုံးပြီးဗုဒ္ဓကိုဆဲထားတဲ့
ဇော်မျိုး ငါ့ဘလော့ကထေရ၀ါဒ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို မင်းက ဖတ်နေကျဘလော့လင့်နဲ့ စွပ်စွဲတယ်
ဓမ္မသုတများမာတိကာမှာ မင်းပြောတဲ့ဖတ်နေကျဘလော့လင့်တွေတင်ထားတာ မဟုတ်လို့ ဘာတွေလဲဇော်မျိုး။
ပိတောက်မြေစီဘောက်မှာဖြစ်ဖြစ် မင်းစီဘောက်မှာဖြစ်ဖြစ် ငါ့နမည်နဲ့ ဆဲရေးတိုင်းထွာနေတာတွေဟာ ငါမဟုတ်ဘူးဆိုတာ တစ်ခါတည်းပြောထားပါရစေ။
ဟဲ.. ဟဲ.. တမျိုးပြီးတမျိုးကိုလိမ်နေပြန်ပြီ။ ပထမတုံးက ဘလော့လိပ်စာပြန်တောင်းတာကနေ ရူးကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားတယ်။ ဒုတိယအကြိမ်မှာ ဘလော့အသိမိတ်ဆွှေရှိလားမေးလိုက်တာ ရူးကြောင်ကြောင် ဖြစ်သွားတယ်။ ပိတောက်မြေမှာ နောက်ထပ် တကြိမ်ထပ်ဆွေးနွေးတော့ ဆီပုံးလေးကို ပြခိုင်းတာ ရူးကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ အခုလည်း အားမလျှော့ပဲ ကော်မန့်မှာ လာပြီး ပြောနေတယ်။ ရူးကြောင်ကြောင်ဖြစ်ရတာ မမောသေးဘူးလား? ကျွန်ကုလားမကြီး။ အဆင်ပြေရင်လည်း ဆီပုံးလေးကို ပြန်ဖွင့်ပါဦးကွာ။ (ဆီပုံးကစာတွေကို မဖျက်နဲ့နော်။ ကြားလားကျွန်ကုလား) အဲဒီထဲက စာသားလေးတွေကို ပြသပြီး ချေးစားတဲ့ခွေးလောက်မှ အဆင့်မရှိတဲ့ မိုဟာမက်တပည့်တွေကို ဟားတိုက်ချင်လို့ပါ။ ဟဲဟဲ ။ မင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲ ငါက ကျွန်ကုလားတွေကို အနိုင်ကျင့်ရတာ ၀ါသနာပါတယ်လေကွာ။ ဟဲဟဲ
ယုတ်ညံ့သည့် မွတ်ဆလင်ကို အမြစ်ဖြုတ်မည့်